by Nyein Chan Aye on Monday, 20 February 2012 at 21:31 ·
နီလာရည်၊ စိန်ရည်၊ မြရည်လူးတဲ့
၂၂ (သို့မဟုတ်) ကျွန်ုပ်၏ရုပ်ပုံလွှာ
ငွေခြည်ရောင် ရေခဲသေတ္တာတို့ ကြားမှာ
ချစ်သူ့ ထမီထဲမှာ ထည့်ချင်တယ်။
လဘ္ဘက်ရည် တစ်ခွက်ပဲ သောက်လိုက်ပါတယ်။
ခမ်းနားပေ့ မြို့တော်ရဲ့ ရပ်ကွက်များ။
ဗိုက်သားပေါ်တဲ့ အရာရှိ မယားငယ်နဲ့
သင်တို့ရဲ့ အရှင်သခင် လူတွေကတော့
မေရှင်ရဲ့ 'ပျို့မှာတမ်း' ဓါတ်ပြား၊
နစ်ဆင်၊ သူ၏ လမ်းစဉ်နဲ့
သိဒ္ဓတ္ထလှိုင် (သုခမိန်လှိုင်) ရဲ့ "ဂျွန်လ၏မိုးရေများ" (၁၉၇၁) ကဗျာစာအုပ် မှ ကဗျာတချို့ကို ကူးယူဖော်ပြပါတယ်။ စာလုံးပေါင်းမှား၊ စာလုံးကျန်ခဲ့ပါက ကဗျာဆရာနဲ့ မသက်ဆိုင်ပါ။ စာရိုက်သူ ကျွန်တော်ရဲ့ အမှားသာဖြစ်ပါတယ်။
Copyright @ Thukhamein Hlaing. All Rights Reserved. This is your personal copy and non-commercial use ONLY.
Nyein Chan Aye facebook မှကူးယူဖော်ပြသည်။
အကြောင်းအရာ။ ။မြန်မာနိုင်ငံလုံးဆိုင်ရာကျောင်းသားများတပ်ဦး (ABSDF) မြောက်ပိုင်းမှ စစ်ရေးတာဝန်ခံ သံချောင်း(ခ)မြင့်စိုး၏ကိစ္စရပ်
လေးစားအပ်ပါသောပြည်ထောင်စုငြိမ်းချမ်းရေးဖော်ဆောင်ရေးလုပ်ငန်းကော်မတီဥက္ကဌနိုင်ငံတော်သမ္မတ ကြီး ဦးသိန်းစိန် ခင်ဗျား။
၁။အနာဂတ်မြန်မာနိုင်ငံတော်ကြီးတွင်အောက်ခြေပြည်သူများအဆင့်ထိဒီမိုကရေစီစံများနှင့်လူ.အခွင့်အရေး စံမျာ့ ပြန့်နှံ့ ရန်နှင့်အဆင့်လိုက်ပညာရေးဆိုင်ရာကိစ္စရပ်များကို NGO အဖွဲ.ပုံသဏ္ဌန်နှင့် လုပ်ဆောင် ရန် အတွက်ရည်ရွယ်ပြီးမန္တလေးမြို.တွင် ABSDF(NB) နှင့်အခြားအဖွဲ.အသီးသီးမှအလင်းဝင်ရောက်လာ
သောကျောင်း သားများနှင့်မန္တလေးဒေသခံကျောင်းသားအချို.ပူးပေါင်း၍ကျောင်းသားရဲဘော်ဟောင်း များ အမည်ဖြင့်အဖွဲ. ဖွဲ.စည်းရန်ကျွန်တော်တို.ပြင်ဆင်နေကြပါသည်။
၂။အဖွဲ.တွင်ABSDFမြောက်ပိုင်းပြန်ကျောင်းသားဟောင်းများပါဝင်နေသည့်အားလျှော်စွာ ABSDF မြောက် ပိုင်းလူသတ်ပွဲအတွင်းသေဆုံးခဲ့ရသူတို.၏မိဘဆွေမျိုးများနှင့်အဆက်အသွယ်မပြတ်တောက် ဘဲ မြောက်ပိုင်း ဖမ်းဆီးနှိပ်စက်မှု.များတွင်ကိုယ်တိုင်ကိုယ်ကျခံစားခဲ့ရသူများလည်းပါဝင်ပါသည်။
၃။၎င်းဖမ်းဆီးသတ်ဖြတ်မှုအတွင်းအသတ်ဖြတ်ခံရသူ ၄၀ ကျော်နှင့် ဖမ်းဆီးပြီးလူမဆန်စွာညှင်းပန်းနှိပ်စက် ခံရသူ ၁၀၀ ကျော် တို.ရှိရာ မန္တလေးမှ ကိုထွန်းအောင်ကျော်၊ကိုချိုကြီး တို.အပါအဝင် ၁၅ ဦးကို ၁၉၉၂ ဖေဖော် ဝါရီ ၁၂ ရက်နေ. ပြည်ထောင်စုနေ.တွင် အစုလိုက်အပြုံလိုက် တပြိုင်နက် သတ်ဖြတ်ခြင်း ခံခဲ့ရ ပါသည်။
၄။၎င်းဖမ်းဆီးသတ်ဖြတ်ခဲ့မှုများကိုဦးဆောင်ကျုးလွန်ခဲ့သူများအတွင်းမှတဦးမှာယ္ခုသာယာဝတီ အကျဉ်းထောင်တွင်သေဒဏ်ကျခံနေရာမှ လွတ်ငြီမ်းချမ်းသာခွင့်အမိန်.အရ တသက်တကျွန်းပြစ် ဒဏ်ပြောင်း လဲကျခံနေရသောထိုစဉ်က် ABSDF မြောက်ပိုင်း၏စစ်ရေးတာဝန်ခံ သံချောင်း (ခေါ်)မြင့်စိုး နမ္မား ဖြစ်ပါသည်။
၅။သံချောင်းသည်လူအစုလိုက်အပြုံလိုက်သတ်ဖြတ်သောရာဇဝတ်မှုများကိုကျုးလွန်ပြီးနောက် ဦးရွတ် စစ် ခေါင်းဆောင်သော (RCSS-SSA) အဖွဲ.သို.နောက်လိုက်နောက်ပါများနှင့်တကွ ရာဇဝတ်မှုများ မှအကာ အကွယ်ရရှိရန်ဝင်ရောက်ခိုလှုံခဲ့ပါသည်။ SSA အဖွဲ.တွင်မူ သူ၏မူရင်းနာမည်ကိုဖျောက်ပြီး စပ်ခွန်ကျော် ဟူသောနာမည်ဖြင့်ဝင်ရောက်ခဲ့ခြင်းဖြစ်ပါသည်။
၆။ယ္ခုအခါ SSA နှင့်ငြီမ်းချမ်းရေးလက်မှတ်ထိုးပြီးချိန်တွင် SSA လူကြီးများက သံချောင်း(ခ)မြင့်စိုး၏
များကြောင့်နိင်ငံတော်မှလွတ်ငြီမ်းချမ်သာခွင့်ပေးခဲ့မည်ဆိုလျှင်သေကြေခဲ့ရသူမိသားစုဝင်များ၊ကိုယ် တိုင် ကိုယ်ကျညှင်းပမ်းနှိပ်စက်ခံခဲ့ရသူများ၎င်းနောက်တရားမျှတမှုကိုလိုလား၍ဤသူများအပေါ်ဂရုဏာ သက်နေသောရဟန်းရှင်လူပြည်သူတရပ်လုံး၏စိတ်အတွင်းယူကြုံးမရဖြစ်ပြီးကြေကွဲခံစားရမည်မှာ အမှန် ပင်ဖြစ် ပါသည်။
၈။၎င်းအပြင်၂၁ရာစုဆန်းစတွင်မြန်မာပြည်တွင်းမှကျောင်းသားထုအတွင်းအချင်းချင်းသွေးကွဲကာ သတ်ဖြတ် ခဲ့မှုကြီးကိုအနောက်နိုင်ငံအစိုးရများ၊ကမ္ဘာ.မီဒီယာများမှလည်းစိတ်ဝင်တစားရှိနေကြရာ သံချောင်း(ခ)မြင့်စိုး ကို လွတ်ငြီမ်းချမ်းသာခွင့်ပေးလိုက်ပါလျှင်မြန်မာနိုင်ငံ၏တရားဥပဒေစိုးမိုးရေးနှင့်အတူနိုင်ငံတော်၏ပုံရိပ်၊ငြီမ်း ချမ်းရေး ရယူထားသော SSA အဖွဲ.၏ပုံရိပ်များကိုလည်းထိခိုက်စေနိုင်ပါသည်။
၉။၎င်းအပြင်ကျွန်တော်တို.အဖွဲ.သည်၎င်းရာဇဝတ်မှု.များကိုတရားစွဲဆိုနိုင်ရန်ပြင်ဆင်ဆောင်ရွက်နေပြီဖြစ်၍၎င်း၊နိုင်ငံတကာရောက်အမှန်တရားလိုလားသောမြန်မာလူငယ်များကလည်း ICC နိုင်ငံတကာရာဇဝတ် မှုခုံရုံး တွင်တရားစွဲဆိုနိုင်ရန်ပြင်ဆင်လုပ်ဆောင်နေပြီဖြစ်၍၎င်း ထင်ရှားသောရာဇဝတ်သားခေါင်းဆောင်တဦးကိုလွတ်ငြီမ်းချမ်းသာခွင့်ပေးရန်မှာမသင့်လျှော်ဟုကျွန်တော်တို.ကျောင်းသားရဲဘော်ဟောင်းများ အဖွဲ.မှ အလေးအနက်ယုံကြည်ပါသည်။
၁၀။တရားစွဲဆိုရာတွင်အသတ်ခံခဲ့ရသူများ၏မိသားစုများနှင့်ကိုယ်တိုင်ကိုယ်ကျအနှိပ်စက်ခံခဲ့ရသောကာယကံရှင်များမှလုပ်ဆောင်နေသည်ကိုကျောင်းသားရဲဘော်ဟောင်းများမှကူညီဆောင်ရွက်ပေးပြီးအဖြစ်မှန်ဖော် ထုတ်ရေး အတွက်အစွမ်းကုန်ကြိုးစားသွားမည်ဖြစ်ပါသည်။ သို.ဖြစ်ပါ၍ သံချောင်း(ခ)မြင့်စိုး နှင့်တကွ ၎င်း ရာဇဝတ်မှုကြီးတွင်ပါဝင်ပက်သက်ကျုးလွန်ခဲ့ကြသူများကိုရဟန်းရှင်လူပြည်သူအားလုံး၏ ဆန္ဒနှင့် အညီ၎င်း တို.ကျုးလွန်ခဲ့သောရာဇဝတ်မှုများအတွက် မြန်မာနိုင်ငံအတွင်းတွင်ဥပဒေကြောင်းအရတရားစွဲ ဆိုနိုင်ရေး အတွက်နိုင်ငံတော်သမ္မတကြီးအနေနှင့်ကူညီဆောင်ရွက်မှုများပြုလုပ်ပေးပါရန်အလေးအနက်တောင်းခံ တင်ပြ အပ်ပါသည်။
ညီညီ (၉/မရမ (နိုင်) ၀၂၆၆၉၇ )
kyaw gyi ab facebook
သေသော်မှတည့်..အော်ကောင်း၏ (တစ်လ ၄၈၀၀၊တစ်နေ့ ၈ နာရီ၊ တစ်နာရီ ၂၀)
Soe Moe Root
"ကျနော်တို့က ညှိနှိုင်းမယ်ဆိုတာကို စက်ရုံသူဌေးက အခုရှောင်နေပါတယ် သူက တိုင်ဝမ်ကပါ စက်ရုံက ဧက ၂၀၀ လောက်ရှိပါတယ်။ အခြေခံလစာက တစ်လမှ လေးထောင့်ရှစ်ရာပဲရတဲ့လူ (၄၈၀၀ ကျပ် တစ်နေ့ ၈နာရီ တစ်နာရီ ၂၀ ကျပ်ပါ) ကအယောက် ၅၀ ငါးဆယ်လောက်ရှိတယ် တချို့ အနည်းဆုက သိန်းကျော်ရပါတယ်။ အဒီလူတွေလည်း ပူးပေါင်းပါဝင် တောင်းဆိုပေးပါတယ်။ခု ဦးဆောင်နေတဲ့အကိုကြီးက ဖိုမန်ပါ သူတို့ လည်း အောက်ခြေအလုပ်သမားတွေအတွက် ပါဝင်ဦးဆောင်နေတာပါ။ အခုသူတို့တွေက ဆန္ဒပြတဲ့ လူတွေ ကို အလုပ်ထုတ်တယ်ဆိုတဲ့ အကြောင်း စက်ရုံထဲမှာစာရင်းကပ်ထားပါတယ်။ ကျနော်တို့က ဒီစက်ရုံတစ်ခု တည်းအတွက်လုပ်နေတာမဟုတ်ပါဘူး မြန်မာတနိုင်ငံလုံးက အလုပ်သမားထုအခွင့်အရေးအတွက် ကိုယ် စားပြုပါတယ်။ အစာငတ်ခံဆန္ဒပြနေတဲ့ လူတွေက ဒီနေ့ဆို သုံးရက်မြောက်နေ့ပါ အခုဆိုရင် ၂၅ ယောက် လောက်ရှိပါတယ်။ ဒီမနက်ပဲအစာအိမ် ရောဂါဝေဒနာရှင်တစ်ယောက်ဆေးရုံတင်ရပါတယ်။ ကျနော် တို့ က ဒီတိုင်းကြီးခွင့်မပြုပါဘူး ကျမ်းမာရေးတကယ်ကောင်းရဲ့လားဆိုတာကို ကြည့်ပါတယ်၊ တစ်ခု ခုဖြစ်သွားရင် ကျနော်တို့မှာ တာဝန်ရှိပါတယ်။ နောက်ဝမ်းကိုက်လို့ဆိုပြီး တစ်ယောက် ဆေးခန်း ကိုသွားနေ ရပါတယ်။ (ဦဆောင်ဆန္ဒပြ အလုပ်သမားတစ်ဦး)
"သူ့ အသက်က တစ်နှစ်ခွဲပါ ရှင့်၊ ကျမတို့က ဟင်္သတကပါ။ သူ့အဖေကဒီတောင်းဆိုနေတဲ့အထဲမှာပါပါတယ်။ ၊ သူ့အဖေက နှစ်ဆယ်ဝန်းကျင်ပါ၊ ဟုတ်ကဲ့ နယ်ကလူတွေလည်းပါပါတယ်၊ မကွေး ဘက်ကလာလုပ်တာပါ။ ယောဘက်ကလည်းပါတယ်၊ နာဂစ်ဒေသကလူတွေလည်း ဒီစက်ရုံမှာလုပ်ပါတယ်၊ နေတော့ဒီစက်ရုံနားမှာ တဲထိုးပြီးနေပါတယ်။" (ဆန္ဒပြအလုပ်သမားတစ်ယောက်ရဲ့ ဇနီးဖြစ်ပါတယ် ) အခြေခံလစာ တစ်လမှာ လေးထောင့်ရှစ်ရာသာရတဲ့အလုပ်သမားတွေ (၄၈၀၀ ကျပ် တစ်နေ့ ၈နာရီ တစ်နာရီ ၂၀ ကျပ်ပါ) အယောက် ၅၀ ငါးဆယ်လောက်ရှိပါတယ် အခုဆန္ဒပြနေတာ ကအလုပ်သမား ၅၀၀ ကျော်ပါ စက်ရုံက စုစုပေါင်း ၈၀၀ လောက်ရှိပါတယ်။ တချို့ အနည်းဆုက သိန်းကျော်ရပါတယ်။ အဒီလူတွေလည်း ပူးပေါင်းပါဝင် တောင်းဆိုနေပါတယ်။ အခုဆိုရင် အစာငတ်ခံဆန္ဒပြနေတာက သုံးရက်မြောက်နေ့ပါ။ အယောက်၂၅ လောက်ရှိပါတယ်။ ဒီမနက်ပဲအစာအိမ် ရောဂါဝေဒနာရှင်တစ်ယောက်ဆေးရုံတင်ရပါတယ်။ နောက်ဝမ်းကိုက်လို့ဆိုပြီး တစ်ယောက် ဆေးခန်းကိုသွားနေရပါတယ်။
.... မှော်ဘီ မြောင်းတကာစက်မှုဇုံ YANGON CROWN သံရည်ကျိုစက်ရုံ ဆန္ဒပြတောင်းဆိုမှု ရှစ်ရက်မြောက်နေ့ အခြေအနေ (၂၇၊၅၊၂၀၁၂ တနင်းဂနွေ နေ့လည် ၁ နာရီ) (မှတ်ချက်...ကိုယ်တိုင်သတင်းသွားရောက် ယူတာဖြစ်ပါတယ် အချက်လက်မှန်ကြောင်း အာမခံပါတယ် ကျနော် SMR ပါ)
soe moe root facebook
ရန်ကုန် သရဖူ သံမဏိစက်ရုံမှာ အခြေခံလစာတိုးမြှင့်ရေး အစာငတ်ခံ ဆန္ဒပြနေသူတွေထဲက တစ်ဦးကို မှော် ဘီပြည်သူ့ဆေးရုံကို မနေ့က ပို့ဆောင်လိုက်ရပါတယ်။
ပြီးခဲ့တဲ့ သောကြာနေ့က အလုပ်သမား ခေါင်းဆောင် ၂၅ ဦး စတင် အစာငတ်ခံ ဆန္ဒပြခဲ့ရမှာနောက်ထပ် ၁၅ ဦး ပူးပေါင်းပါဝင်ပြီး အလုပ်သမား ၄၀ ဆက်လက် အစာငတ်ခံ ဆန္ဒပြနေတာ ဖြစ်ပါတယ်။
ဆန္ဒြုပသူတွေထဲက ၄ ဦးကျန်းမာရေးအခြေအနေ ဆိုးရွားနေပြီးသူတို့ထဲကတစ်ဦးကို မနေ့က ဆေး ရုံပို့လို က် ရတယ်လို့ အစာငတ်ခံဆန္ဒပြနေသူတစ်ဦးကRFA ကို ပြောပါတယ်။
Min Ko Naing 88 piano & candle lights
လက်ရှိပြည်သူတွေရင်ဆိုင်ခံစားနေရတဲ့ မီးပျက်တဲ့ဒုက္ခကိုတင်ပြတဲ့အနေနဲ့ ကိုမင်းကိုနိုင်ကိုယ်တိုင် စန္ဒယားတီးပြီး သီချင်းတစ်ပုဒ်ဖျော်ဖြေခဲ့ပါတယ်။
၂၀၁၂ မေ ၂၆ ရက် ညနေ ၆ နာရီက ရန်ကုန်မြို့၊ ပုဇွန်တောင်မြို့နယ် ၊တောင်လုံးပြန်ရပ်ကွက်မှာ မြန်မာနိုင်ငံ လူငယ်များ အစည်းအရုံး ရံပုံငွေဈေးရောင်းပွဲနှင့် ဖျော်ဖြေရေး အစီအစဉ်တစ်ခုမှာ ဖြစ်ပါတယ်။
လူဖြစ်တည်ခွင့်နောက်ဆုံးအချိန် ( ၃ )
by Kyaw Gyi AB on Saturday, 26 May 2012 at 15:48 ·
အောက်ပိုင်းကပုဆိုး နဲ့ ၊ အထက်ပိုင်းက စစ်အင်္ကျီ(ဘက်တံဆိပ် မပါ) နဲ့
ဒါပေမဲ့ လူ ခန္ဓာကိုယ်လား၊ အဝတ်အစားလား ခွဲခြားမရတော့
သွေးတွေ၊ မြေမှုံ့ဖုံမှုံ့တွေ အလိမ်းလိမ်း နဲ့ အရောင်တွေ အားလုံးဟာ ပေါင်းစပ်နေတယ်
အဝတ်အစားတွေ အပိုင်းပိုင်းပြတ် သူ့ခန္ဓာကိုယ် မှာလဲ အပိုင်းအပိုင်း ဒါဏ်ရာတွေ ထပ်လို့ 
သူ့ ကို ငါးကင်တကောင်လို ဒါးနဲ့ မွှန်းထားတယ်လေ
ပြီးတော့ ဒါဏ်ရာတွေကို ဆားပက်ထားလို့ ပေါ့
သူ - ကိုတင့်လွင် တဲ့
အသက်(၃၀)လောက်၊ စစ်ကိုင်းမြို့သား၊ မြစ်ကြီးနားကလို့ လူသိများပါတယ်
အရင်က တပ်ထွက် (တပ်ကြပ်)
ကိုတူးတူး(ခေါင်းဖြတ်ခံရ ၁၅ယောက်) ရဲ့ ယောက်ဖ
ကိုတူးတူးရဲ့အမ (မခင်အုန်းကြူ- မြစ်ကြီးနား) နဲ့ အိမ်ထောင်ကျတယ်လေ
ကလေးတစ်ယောက်(သို့) နှစ်ယောက် ရှိတယ်
တပ်ကထွက်ပြီး တီးဆရာလုပ်ခဲ့သေးသတဲ့၊ အမဖြစ်သူ( ကိုတင့်လွင်ဇနီး)က
မောင်အတွက် စိတ်မချလို့ တောထဲလွှတ်ပုံရပါတယ်
ရက်တိုသင်တန်းတွေ ပေးဖို့ ဖြစ်လာတယ်
ဗန်းမော်မြို့က (၆)တန်းနဲ့ (၇)တန်းကျောင်းသားလေးတွေ တော်တော်မျာများရောက်လာလို့ ပါ
ဘာလုပ်ရမှန်းမသိ၊ ချော့မော့ ပြန်လွှတ်ပေမဲ့ ဒီအထဲကျန်တဲ့တချို့
မောင်ငယ်၊ သက်လင်း၊ ဖိုးနှောင်း၊ မောင်ထွေး၊ နိုင်စော
ငယ်လွန်းလို့ အန္တရာယ်ကင်းအောင် ဗဟိုကို ပို့ခဲ့တယ်၊ ဗဟိုရုံးအကူတွေအနေနဲ့ မွေးဖို့
ဒါပေမဲ့ အသုံးချသူတို့ မူမမှန်မှုအရ
သူတို့ဟာ ပုရွက်ဆိပ်တပ်ကြီးဆိုတဲ့နာမည်နဲ့ ကျောင်းသားချင်းသက်ဖြတ်မှုမှာ စစ်ကျောရေး အဖွဲ့တွေ ဖြစ်ခဲ့တယ်
ဟေ့ကောင် ထွန်းအောင်ကျော်၊ မင်းကို ငါတို့မမေးဘူး၊ ပုရွက်ဆိပ်တပ်ကြီးနဲ့ပဲလွှတ်ပေးမယ်၊